उपचारका नाममा थाईल्याण्ड उडेका केपी ओलीको यस्तो छ योजना ! सबै कार्यक्रम सार्वजनिक ! – Sanghiya Online
उपचारका नाममा थाईल्याण्ड उडेका केपी ओलीको यस्तो छ योजना ! सबै कार्यक्रम सार्वजनिक !
Posted on : January 17, 2018 - No Comment
काठमाडौं । विरामी भएर नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्न थाईल्याण्ड उडेका9 भनिएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थाईल्याण्डमा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतसँग गम्भिर विषयमा छलफल गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
उनी थाईल्याण्डमा रहँदा विभिन्न पक्षीय गम्भीर वार्ता भइरहेको स्रोत बताएका छन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत गएर उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसंग भेटवार्ता गर्नु, त्यहाँबाट नरेन्द्र मोदीले आफ्ना दूत मंगलबार बैंकक पठाउनु, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको भ्रमणलाई त्यागेर हिमानी मंगलबार नै बैंकक जानु र पार्टी एकतापछि मात्र स्वास्थ्योपचारमा जाने बताएका ओली बुधबार बैंकक जानुले गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको स्पष्ट छ ।
स्रोतका अनुसार यसपटकको बैंकक यात्रामा ओलीले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसंग विभिन्न ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ गर्दैछन । भारतीय मात्र होइन चिनियाँ पक्षसमेत बैंककमा रहेको स्रोत बताउँछ । पूर्व दरबार निकट स्रोत भन्छ ‘माओवादीसंगको एकता अगाडि नै राजनीतिले केही कोल्टे फेर्न सक्छ । उद्धेश्य स्पष्टै छ ।’ नेपालमा राजसंस्थालाई कुनै सम्मानित स्थानमा राख्नका लागि एमाले अध्यक्ष ओली तयार देखिएका छन् ।
सर्बोच्चको फैसला पछिको अंकगणित ! फेरी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने संकेत, यस्तो छ हिसाब
न त उमाकान्त न त कायस्थ ! केहिबेर चर्काचर्की, बैठक स्थगित ! कसको सम्भावना हो त ?